FIFEHEZAN’NY TANTSAHA NY TEKNOLOJIA: Mampatahotra ny dahalo
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire juil 31, 2018
Tsy nisy omby very intsony tao Ambalavao Fianarantsoa tao anatin’ny heritaona. Nijoro vavolombelona i Modeste Ratsimbazafy, tantsaha nahazo fiofanana momba ny teknolojia. “ Nampianarina ny nfampiasàna ny finday ny tenako ary nahita tombontsoa tamin’izany satria eo noho eo dia afaka mampita vaovao. Nitsiry ny hevitra ka nananganana fikambanana ho an’ireo mpiompy omby ny tenako. Nampitaiko tamin’ireo mpikambana ny fahalalana azoko. Tamin’ny alalan’ny antso sy fandefasana SMS, afaka nanara-dia ireo dahalo mpangalatr’omby izahay. Vokany, betsaka ireo dahalo tratra”, hoy i Modeste Ratsimbazafy, filohan’ny fikambanan’ny mpiompy omby ao Ambalavao Fianarantsoa “Soa miara-dia”.
Ny toeram-piofanana PIF TIC tao Ambositra no nanome fiofanana ity raim-pianakaviana tantsaha ity. Efa 13 ny isan’ny ivon-toerana hanovozana ny loharam-pahalalàna ho an’ny olom-pirenena te handroso (PIF TIC). Anisany mampiofana ny tantsaha momba ny teknolojia toy ny fampiasana ny solosaina, ny finday , ny “internet” tahaka ny fanokafana adiresy mailaka na kaonty “facebook”, fitrandrahana ireo fomba fambolena na fiompiana moderina… ity ivon-toerana ity. Vao avy notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny 30 jolay 2018 ny tranon’ny PIF TIC eto Antananarivo. Eo akaikin’ny kianjan’ny ANS Ampefiloha no misy azy. Tsy ireo tantsaha ihany no afaka manovo fahalalana ao fa izay rehetra liana amin’ny fifehezana ny teknolojia dia misokatra ho azy ireo ny varavarana.
‹ MAGAZINE « TRANDRAKA N° 3 » : Gestion de fonds publics au cœur de l’investigation	› ANDRO MAITSO: Tsy mampiasa moto sy fiara